Aqoonta Qalabka |
U fiirso bacriminta dabiiciga ah
Horumarinta beeraha cagaaran waa inay marka hore xalliyaan dhibaatada wasakheynta ciidda. Dhibaatooyinka caamka ah ee ka jira carrada waxaa ka mid ah: isku soo ururinta carrada, isu dheelitir la’aanta nafaqada macdanta, maaddada dabiiciga ee ku yar, lakabka beeraha oo gacmeed, aashitada ciidda, cusbaynta ciidda, wasakhda ciidda iyo wixii la mid ah. Si aad u sameyso t ...
Maxay yihiin noocyada Bacriminta isku dhafan
Bacriminta isku-dhafan waxaa loola jeedaa ugu yaraan laba ka mid ah saddexda nafaqo ee nitrogen, fosfooraska, iyo potassium. Waa bacrimin kiimiko ah oo lagu sameeyo hababka kiimikada ama qaababka jireed iyo hababka isku dhafka. Nitrogen, fosfooraska, iyo habka calaamadeynta nuxurka nafaqada ee potassium: nitrogen (N) fosfooraska (P ...
Ku rakibida mashiinka noocyada kala duwan ee Gawaarida Gawaarida Gawaarida
Mashiinka Gawaarida Noocyada Gawaarida Gawaarida waa qalab isdaba-marin iyo otomatig ah oo otomaatig ah oo leh taako dhaadheer iyo qoto dheer oo ah digada xoolaha, dhoobada iyo qashinka, dhoobada sifeynta, keegga digaagga ee liita iyo boodhka cawska ee miraha sonkorta, sidoo kale waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qallajinta iyo fuuq-baxa dabiiciga ..
Habka wax soo saarka bacriminta ee xarunta
Bacriminta isku dhafan, oo sidoo kale loo yaqaan bacriminta kiimikada, waxaa loola jeedaa bacriminta ay ku jiraan wax kasta oo ka kooban laba ama seddex nafaqeyn oo ka kooban cunno nafaqo leh oo nafaqo leh, fosfooraska iyo macdanta laga sameeyay isku-dhafka kiimikada ama habka isku-darka; Bacriminta isku dhafan waxay noqon kartaa budo ama granular. Bacriminta xarunta ...
Qalabka wax soo saarka oo dhameystiran bacriminta dabiiciga ah
Qalabka buuxa ee qalabka soo saarista bacriminta dabiiciga ah guud ahaan waxaa ka mid ah: qalabka halsano, isku dhafka qalabka, qalabka wax lagu burburiyo, qalabka kala soocida, qalabka qalajinta, qalabka qaboojinta, qalabka baaritaanka bacriminta, qalabka baakadaha, iwm.
Doofaarka doofaarka bacriminta dabiiciga ah qalab dhameystiran
Xulashada alaabta ceyriinka ah ee doofaarka bacriminta dabiiciga ah ee bacriminta iyo bacriminta bio-organic waxay noqon kartaa digada xoolaha ee kala duwan iyo qashinka dabiiciga ah. Qaaciddada aasaasiga ah ee wax soosaarku way kala duwan tahay iyadoo kuxiran nooca iyo alaabta ceyriinka ah. Qalabka buuxa ee qalabka bacriminta dabiiciga ee digada doofaarka guud ahaan waxaa ka mid ah ...
Qalabka khadka bacriminta dabiiciga ah
by admin on 2021-06-29
Xulashada alaabta ceyriinka ee bacriminta dabiiciga ah iyo bacriminta bio-organic waxay noqon kartaa digada xoolaha iyo qashinka dabiiciga ah. Qaaciddada aasaasiga ah ee wax soosaarku way kala duwan tahay iyadoo kuxiran nooca iyo alaabta ceyriinka ah.
Habka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah
Xulashada alaabta ceyriinka ee bacriminta dabiiciga ah iyo bacriminta bio-organic waxay noqon kartaa digada xoolaha iyo qashinka dabiiciga ah. Qaaciddada aasaasiga ah ee wax soosaarku way kala duwan tahay iyadoo kuxiran nooca iyo alaabta ceyriinka ah. Qalabka aasaasiga ah ee aasaasiga ah waa: digada digaaga, digada duck, digada goose, digada doofaarka, catt ...
Tikniyoolajiyadda halsano ee digada digaaga bacriminta dabiiciga ah
by admin on 2021-05-25
Waxa kale oo sii kordhaya beero waaweyn iyo kuwo yaryar. Inta ay daboolayaan baahida hilibka dadka, waxay kaloo soo saaraan tiro aad u tiro badan oo xoolaha iyo digada digaaga ah. Daaweynta macquulka ah ee digada ma aha oo kaliya inay si wax ku ool ah u xallin karto dhibaatada wasakheynta deegaanka, laakiin sidoo kale waxay isu rogi kartaa qashin. Weibao wuxuu abuuraa ...
Digada adhiga tiknoolajiyada bacriminta dabiiciga ah ee bacriminta
by admin on 2021-05-18
Qorshaha soo saarista ee bacriminta dabiiciga ah
Mashruucyada ganacsi ee hadda socda ee bacriminta dabiiciga ahi kaliya ma aha kuwo la jaan qaadaya faa'iidooyinka dhaqaale, laakiin sidoo kale waxay la jaanqaadayaan hagidda siyaasadaha beeraha deegaanka iyo cagaaran. Sababaha mashruuca soosaarka bacriminta dabiiciga ah Ilaha wasakheynta deegaanka beeraha: ...
Tikniyoolajiyadda halsano ee Bacriminta Bacriminta Dabiiciga ah